My Opinion on Internet of Things | Hash Tech Guru
My Opinion on Internet of Things
Arduino နဲ့ပတ်သက်ပြီး လေ့လာနေတာတွေ ရှိတယ်… အားအားယားယား ဆော့ချင်လို့ ကလိချင်လို့ မဟုတ်ဘူး… အခု အရမ်းခေတ်စားတဲ့ AI တွေ Machine Learning တွေကို သဘောကျပါရဲ့… တကယ်တန်းလုပ်တော့ Train ဖို့ Data ရှိမှတို့.. Research အတွက် Resource တွေ လိုတာတို့.. တကယ်တန်း ဒါတွေက Coporate တွေအတွက်မှ အသုံးဝင်မယ် အဆင်ပြေမယ်လို့ ထင်တာပဲ… ပိုသဘောကျတာတော့ IOT ပဲ… IOT ကို The Most Promising Tech လို့ မြင်တယ်… လူတွေ ဘဝထဲမှာ အများကြီးအသုံးဝင်ပြီး လေ့လာရလွယ်ကူမဲ့ Tech တစ်ခုပဲ… IOT Device တွေအတွက် Development Company တွေလဲ ရှိလာဦးမယ်ထင်တယ်…
ကလေးတွေ လုပ်တဲ့ Robot တွေ Smart Home တွေထုတ်နေကြတာ တွေ့တယ်.. သိပ်စိတ်မဝင်စားလှဘူး.. မီးလောင်ရင် ရေဖြန်းတဲ့ Bot, ကိုယ့်အိမ်ကို Intruder ဝင်ရင် Alarm ပေးတဲ့ စနစ်တို့ အဲ့ဒါတွေက Tech ကို အပြည့်အ၀ သုံးပြပေမဲ့ တကယ်တန်း Commerial အသုံးဝင်ဖို့ ခက်တယ်.. Smart Home Package တစ်ခုလုံးက သိပ်ဈေးကြီးတယ်… တကယ်လုပ်မယ်ဆိုရင် Quality Assurance တွေလုပ်ရမယ်.. Technical Support အနောက်က လိုက်ရမယ်… ဇာတ်လမ်းက ရှည်ဦးမှာ.. ပိုက်ဆံရသလို ပြသနာတက်ရင်လဲ တော်တော်ကြီးမဲ့ ပြသနာ… နောက်တစ်ခုက ဒါက Luxary ပဲ.. ခလုတ်ကနေ မီးသွားပိတ်လဲ ရတဲ့ဟာကို အပျင်းတစ်ပြီး App ကနေ ပိတ်မယ်ဆိုရင် ဇာတ်လမ်းတွေ ရှုပ်ကုန်ကော… Android App ပဲထားဦး.. Lock ဖွင့်ဦး Smart Home App ကို ရှာဦး ဖွင့်ဦး မီးကို ပိတ်ဦး.. အနည်းဆုံး ၅ စက္ကန့် လောက် ကြာတယ်… ထပိတ်လိုက်တာ ပိုမြန်တယ်.. တခြား အသုံးဝင်တာတွေတော့ရှိပါတယ်.. တကယ်လုပ်မယ်ဆို ဈေးကြီးမယ်..
Robot ကတော့ စိတ်ကို မဝင်စားတာ… တလောက Robot Fight ဆိုတာ တွေ့လိုက်တယ်.. တကယ်ချတာလားဆိုတော့ Robot ကို Remote Controller နဲ့ လှမ်းထိန်းပြီး ချကြတာပါပဲ… တကယ် Robot Fight ဆိုရင် အနည်းဆုံးတော့ Game ထဲက NPC တွေလိုမျိုး အနားကပ်လာရင် တီးတဲ့ Script မျိုးလောက်တော့ ထည့်ထားပေါ့… သိုင်းကွက်တွေသင်ပေးထားပြီး သူ့ဟာသူ ချပလေ့စေပေါ့.. သိုင်း Algorithm ပိုကောင်းတဲ့ကောင်က နိုင်မှာပဲ.. Remote Controller နဲ့ ထိန်းတာကိုတော့ ဖီးကြဲတယ်.. ဒါကြောင့် သိပ်စိတ်မဝင်စားတာ.. ကျနော့အမြင် Robot က Commerial App အတွက်လဲ သိပ်တော့ မမြင်လှဘူး… Entertainment ဘက်ပဲ သွားလို့ရမယ်…
ကျနော်တို့ Startup တွေ SME တွေ တိုးတက်ဖို့ဆိုရင် အချင်းချင်း ကြည့်ဖို့လိုတယ်.. Customer Facing App တွေပဲ ရေးကြတယ်.. Business to Business - B2B App ရေးကြတယ်.. Business အကြီးကြီးတွေ အတွက်ပဲ ရေးကြတယ်.. တကယ်တန်း B အသေးတွေအတွက်ကျတော့ ပြန်မကြည့်ကြတော့ဘူး… ကိုယ်တိုင် Product တစ်ခု ထုတ်ဖို့ ကြိုးစားနေတယ်… တခြားမဟုတ်ဖူး.. Attendance ကောက်တဲ့ စနစ်ပဲ… လောလောဆယ်က SME / Startup တွေပြသနာတက်တာများတာက သူငယ်ချင်းတွေပေါင်းလုပ်ရင် ဟိုကောင်က မလာဘူး ဒီကောင်က အလုပ်မလုပ်ဘူး စသည်ဖြင့် ပြသနာတွေအပြင် ဝန်ထမ်းတွေ ခန့်ထားတယ်ဆိုရင်လဲ ထိန်းရတာလဲ ခက်တယ်.. လစာပေးရတာလဲ ခက်တယ်.. Attendance ကောက်ဖို့ကလဲ Android App လိုဟာမျိုးနဲ့က တကယ်တန်း အဆင်မပြေဘူး… လုံးလုံး ထည့်ဖို့ မေ့ကြတာရှိတယ်… အဝင်ထည့်ပြီး အထွက် ထည့်ဖို့ မေ့နေတာ ရှိတယ်.. ပြသနာက အများကြီးပဲ.. Excel Sheet လဲသိပ်မထူးပါဘူး.. မေ့ကြတာပဲ… လက်ဗွေနှိပ်တဲ့ စနစ်က ၅ သိန်းလောက်ကနေ စပြီး ၈ သိန်းလောက်ထိ သွားတယ်.. SME / Startup အနေနဲ့ ဝန်ထမ်း ၂၀ မကျော်မချင်း ဝယ်ရတာ မတန်ဘူး… ဝယ်ပြီး မနှိပ်ရင်လဲ တိုင်ပတ်ဦးမယ်.. စနစ်ကလဲ မရှိလို့ မရဘူး… Startup တွေ ပျက်တာ စည်းကမ်းမရှိလို့ ပျက်ကြတာ… FingerPrint စက်က Web Panel ပါတယ်.. Data Export ပြန်ထုတ်လို့ရတယ်.. လစာတွက်လု့ိရတယ်… Startup တွေအတွက် ဈေးကြီးတာ တစ်ခုပဲ… ၅ သိန်း ၈ သိန်းလောက်ကြီး မသုံးချင်ဘူး
RFID Card သုံးမယ်.. ဝန်ထမ်းက မနက် ရုံးရောက်ရင် Attendance Device ပေါ်မှာ ကတ်တချက် ပုတ်ရုံပဲ.. ကတ်ကလဲ တစ်ကတ်မှ ၈၀၀ ၁၀၀၀ ပဲ… Device ကို Arduino / PI သုံးပြီး Card ကို Authenticate လုပ်မယ်… မီး + Alarm တချက်မြည်ပေးမယ်.. Business Owner ကို Slack Notification ပို့မယ်… API ကို လှမ်းခေါ်ပြီး Database ထဲသိမ်းထားမယ်… Owner က ပြန်ကြည့်လို့ရမယ်… Hourly Rate Configure လုပ်ထားရင် လကုန်ရင် လစာတခါထဲတွက်ပြီးသား… Software asaService ( SaaS ) တစ်ခုလုပ်ထားပြီး Online ကနေ ပြန်ကြည့်လို့ ရမယ်… ဘယ်လောက်မှ ကုန်ကျစရိတ်မရှိဘူး.. Device အတွက် လွန်ရော ကျွံရော ၈ သောင်းပဲ.. ဒါတောင် ၅ သောင်းလောက် ပိုတွက်ထားတာ…
မေးစရာရှိတာက ဝန်ထမ်းအချင်းချင်း ကတ်ပေးပြီး ဖြတ်ခိုင်းရင်ကော ဆိုတော့ ဖြတ်လဲ ဖြတ်ဖြတ်ပဲ.. Startup မှာ လူ ၁၀ ယောက်ရှိရင်တောင် တော်တော်များနေပြီ.. Fraud လုပ်လို့ မလွယ်ဘူး.. ဒါမှ Fruad လုပ်လဲ ထုတ်ရုံရှိတာပဲ… Finger Print Module ပါလာရင် ပိုဇာတ်လမ်းရှုပ်ပြီး ပိုဈေးကြီးတယ်.. အဲ့ဒါဆိုလဲ အသင့်သုံး FingerPrint စက်ပဲ ဝယ်တော့မှာပေါ့
ဒီလို Arduino based Device + SaaS Service ကို SME / Startup တွေအတွက် Package အလိုက် ဈေးပေါပေါ ရောင်းဖို့ စိတ်ကူးထားတယ်.. Device + SaaS Software ကိုမှ တနှစ် ၂ သိန်းလောက်ဆို အဆင်ပြေလောက်တယ်… ဘယ်သူမှ မဝယ်လဲ ကိုယ့်ဟာကိုယ် သုံးမယ်လေ :P စိတ်ဝင်စားရင် လက်လာတို့ထားနော်